Himalaya Dainik » विवाहपछिको जीवन खुसी र मजबुत कसरी बनाउने ?
विवाहपछिको जीवन खुसी र मजबुत कसरी बनाउने ?
विवाहपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने त ?
यसो गर्दा जीवनसाथीले खुलेर मनको कुरा व्यक्त गर्ने मौका पनि पाउँछन् । शारी रिक सुखले मात्र सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदैन । त्यसैले शारी रिक सम्बन्धमा भावना पनि जोडिन आवश्यक हुन्छ ।